बोक्सी भन्दै कुटपिट, पीडितलाई उल्टै ५० हजार जरिवाना ! - Everest Dainik - News from Nepal
बोक्सी भन्दै कुटपिट, पीडितलाई उल्टै ५० हजार जरिवाना !
जनकपुर, कार्तिक १८ । घरायसी र लेनदेन विवादमा धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा परिवारकै सदस्यले बोक्सी भन्दै महिलालाई कुटपिट गरेका छन् । विवाद मिलाउन बसेको पञ्चायतले कुटार्इ खाएकी महिलालाई उल्टै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
धनौजी–२ की ३८ वर्षीया मनतोरिया मण्डललाई कात्तिक ९ गते घरकै सदस्यले कुटपिट गरेका थिए । अन्यायमा परेको उजुरीसहित आइतबार जनकपुर आइपुगेकी मण्डलले प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवलाई पीडा सुनाइन् ।
याे पनि पढ्नुस दश दिनदेखि बाटो अवरुद्ध हुँदा समस्या
इन्दलले बुहारी बोक्सी रहेको भन्दै पञ्चायत डाकेका थिए । पञ्चायतमै सबैका सामुन्ने उनले मनतोरियालाई कुटपिट गरे । पञ्चायतमा खत्वे समाजका माइजन फुलगेन मण्डल, दुखी मण्डल, वीरेन्द्र मण्डललगायतले जेठाजुको लहैलहैमा लागेर आफूलाई कुटपिट गरेको उनको आरोप छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाकी सांसद यादवले आफ्नै पार्टीका सांसद साहलाई कुटपीट गरेपछि...
कुटपिटपछि मनतोरियाले धनौजी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजकुमार साहलाई उजुरी गरिन् । वडाध्यक्ष साहले पञ्चले गरेको निर्णय स्वीकार गर्न दबाब दिएपछि प्रहरीमा उजुरी गरेको उनले बताइन् । साहले जरिवानाको निर्णय पञ्चायतले गरेको र मनतोरियालाई प्रहरीमा जान सुझाएको बताए ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले बोक्सी आरोपमा महिलालाई यातना दिएको ठहर भए कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने बताए । उनले घटनाबारे बुझन तत्कालै निर्देशन दिइएको र दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउने बताए । त्यस क्षेत्रका प्रदेशसभा सांसद रामसरोज यादवले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । कान्तिपुरबाट
याे पनि पढ्नुस पत्रकार बने पार्टीबाट मेयरका दावेदार
ट्याग्स: janakpur, Mantoriya mandal